Dzorera Purogiramu - Buddhatrends
zvinhu zviri mumotokari yako
yega motokari inokosha
Kushambadzira Kwepasi Pasi Pose Pamitemo Yese! Pinda HIPPIELOVE pakutora uye uwane 10% OFF.
Kushushikana pamusoro pehukuru
Mutengi agutsikana uye anofara
Shop All Ona MITSA YOSE
vatsva Ona ALL
Kusunungurwa Kusununguka Munyika Yose Dzvanya pano
VADZIDZA UYE KUDZOKA KUTAURIRWA
Kubhadhara uye Kuchinja Mitemo
Kana iwe wakagamuchira chimwe chinhu chakakuvadza kana chakakanganisika tichafara kufambisa chinhu chacho pasina mari yakawedzerwa kwauri. Ndapota taura nesu mukati maawa 48 mushure mokunge mupiwe mutemo.
Unofanira kugamuchira chinhu chisingakanganisi ruvara kana kukura kupfuura iyo yaunorayira pakutanga, tapota tumira email kwatiri mufananidzo wechinhu (s) chinoratidza tema tema uye mapuranga ayo epakutanga mukati meawa 48 pawakagamuchira murairo kuti uwane kudzokera.
Tinokwanisa kukupa iwe kushandiswa pasina mari yakawedzerwa kana ikawira pasi pasi pamiriridzo:
Zvinhu zvakashata - zvakakuvadzwa / zvakaputsika kana zvakasvibiswa pakuuya.
Takatumira chinhu chisina kunaka - ukuru, chimiro, ruvara.
Mapurisa ari kurasikirwa mukufambisa.
Mienzaniso inopiwa mune tsanangudzo yemugove wega wega kuti ikubatsire kuwana zvakakwana zvakakwana. Isu hatina kutakura basa nekuda kweNON-RECEIPT kana KUFUNGA nokuti chinhu hachina kukwana iwe.
Cherechedza: Ndapota chengetedza kuti ruzivo rwamakapa rwuri rwakarurama musati maisa mvumo yenyu kudzivirira kurasikirwa mumakmail kana zvimwe zvinotadza kuitika.
Buddhatrends haichazovi nekutongwa kune chero mapepa misroute.
Ndinodzorera sei chigadzirwa?
Kana icho chawakatenga chisingakutenderani nechikonzero chechikonzero, unogona kuchidzorera mukati mezuva re15 mushure mekutumira zuva.
Dare harina kutakura mari yakananga yekudzorera zvinhu. Ndapota cherechedza kuti kudzoka dzimwe nguva kunotora mazuva e15 kusvika kwatiri. Kana ukadzoka chigadzirwa usina fomu yekudzorera, kubhadhara kunogona kutora nguva yakareba. Iko kubhadharwa kunobvumirana kuchaitwa kamwe chete kana kudzoka kwako kugamuchirwa. Ndapota cherechedzai kuti zvinhu chete zviri mumamiriro ezvinhu akakwana uye mumapurasitiki avo epakutanga zvichadzorerwa. Nguva yekudzorera kubhadharwa inobva pane bhengi rako uye inogona kusiyana.
Kana iwe une zvimwe zvinonetsa, tapota tumira ku FAQ yedu kana taura neVatengi Vedu nekutumira tikiti pawebsite yedu.
Ndinogona here kubvisa zvigaro zvangu? Ehe. Kuchenesa kunofanira kuitwa mukati meawa 24 ekuraira kuiswa. Titumirei email mukati memaawa e24 uye tiudzei chikonzero nei iwe uchida kubvisa urongwa hwako.
Hatibvumi kubviswa kwemirairo kunze kwewindo remaawa 24 uye / kana nekuda kwe Standard Standard Reason. Ndapota cherechedza kuti Standard Shipping Yedu inotumirwa mu FAQ yedu saka vatengi vese vanofanirwa kuziva izvi izvi vasati vapedzisa mutemo.
Ndapota usatumira kutora kwako kumashure. Titumirei email inotaurira hanya yenyu uye tumirai mifananidzo yechinhu (s) ichiratidza tambo yakakura uye mapuranga ayo epakutanga mukati maawa 48 pawakagamuchira mutemo kuti uwane mutsva kana kudzorera.
Cherechedza: Tete redu richaongorora / kuongorora mufananidzo (s) tisati tabudisa mutsva kana kudzorera. Buddhatrends ane kodzero yekuramba chero kushandiswa uye kubhadharwa mari kana isingasviki nezviyero zvataurwa pamusoro apa.
Kana usina kuwana mari yekubhadhara, chengeta bhangi yako yebhangi zvakare uye taura nekambani yako kadhi rechikwereti, zvinogona kutora nguva isati yatora mari yako. Kana iwe waita zvose izvi uye usingati wambowana mari yako zvekare, tapota tibvunze isu nokutumira tikiti pa webhusaiti yedu.
Have any questions or need to return a product? Message us and one of our customer care specialist will get back to you as fast as lightning!
Kuti uwane makonikoni, zvikomborero zvakakosha, uye nhau dzemazuva ano dzakapa zvikwata kubhokisi rako rekudisa!